IJelo Losasazo LamaNgqina
NGO-OKTOBHA 6, 2014, kwalingwa isitishi sokuqala seIntanethi ngesiNgesi esibizwa ngokuba liJelo Losasazo LamaNgqina. * Ukususela ngoAgasti 2015, ezi nkqubo sele ziguqulelwe ngeelwimi ezingaphezu kwe-70 ukuze abazalwana noodade abangakumbi bazonwabele ezi nkqubo zosasazo zomelez’ ukholo. Ababukeli abaninzi kulo lonke ihlabathi baye bavakalisa uxabiso ngeli lungiselelo litsha lichulumancisayo. Kodwa yintoni eyayibandakanyekile ekusekeni iJelo Losasazo LamaNgqina?
Kwakufuneka kufunyanwe indawo efanelekileyo. Ikomkhulu lehlabathi lamaNgqina kaYehova eBrooklyn, eNew York, layikhetha kwisakhiwo esise-30 Columbia Heights. Kwisithuba nje esingangeveki, le ndawo yacocwa, iSebe Lokulungisa laqalisa ukuvula indawo yeJelo Losasazo ngoxa iqela labazobi lisakha indawo endilisekileyo, kodwa eyezi mini. Abazalwana noodade abaninzi abasuka kulo lonke elaseMerika basebenza iintsuku ezininzi bezoba isitudiyo, beceba nendlela yokusakha ngokukhawuleza. Uphando ngokuqhelekileyo oludla ngokuthatha iinyanga lwathatha iintsuku, ibe ngokuqhwanyaza kweliso iSebe Lokuthenga laoda amakhulu ezinto eziyimfuneko.
Kwafakwa iintambo ezinde kakhulu, ibe iqela labasebenzi laqinisekisa ukuba zonk’ izixhobo zisebenza kakuhle. Kwangaxeshanye, iqela lethu lomculo weokhestra lalishicilela umculo oza kudlala xa kuqala usasazo kwizitudiyo zethu ePatterson lincediswa ngabazalwana noodade abasuka kumazwe amaninzi nababesoloko besiya kurekhoda. Kwabhalwa ngoko kuza kurekhodwa, kwalungiselelwa imiboniso, babe abo basebenza ngeevidiyo baseBrooklyn, ePatterson, naseWallkill, nabanye abasemhlabeni wonke besebenza nzima ukuze kwenziwe ividiyo. Xa sagqitywayo isitudiyo nezixhobo zafakelwa, kwaqaliswa ukulungiselelwa oko kwakuza kusasazwa kwiinyanga zokuqala.
Isitudiyo sokurekhoda uSasazo LwamaNgqina, eBrooklyn, eNew York
Xa sabuza umntu owazi kakuhle lo msebenzi ukuba udla ngokuthatha ixesha elingakanani kwisitudiyo esingaka, wathi iba ngunyaka onesiqingatha. Abazalwana noodadewethu ababesebenza nzima bawenza ngeenyanga ezimbini kuphela!
Imiphumo yoku ivuyisa kakhulu! Usasazo lwenyanga nganye, oludla ngokukhutshwa ngoMvulo wokuqala enyangeni, lubukelwa izihlandlo ezingaphezu kwezigidi ezibini ngaloo nyanga. Zona ezinye iividiyo nezinto ezisasazwayo zibukelwa izihlandlo ezingaphezu kwezigidi ezilishumi ngenyanga.
“Olu sasazo lundenze ndasondela ngakumbi kwintlangano kaYehova nakwiQumrhu Elilawulayo. Ndiyazi ukuba ndililungu lentsapho enothando.”—EKenya
Bathini bona abantu bakaYehova ngeli lungiselelo litsha lezinto zobuthixo? Nazi ezinye zezinto abazithethayo ezibonisa indlela abanombulelo ngayo:
“Olu lolunye lwamarhatya endakha ndonwaba ngawo ebomini bam! Mna nomkam besibukele iJelo Losasazo LamaNgqina lukaMeyi 2015, andinamazwi okuyichaza indlela endivuya ngayo. Esi sesinye sezona zipho endizithanda ngokwenene kwendakha ndazifumana kuYehova. Sithi enkosi kwiQumrhu Elilawulayo nakubo bonke abazalwana noodade abaye basebenza nzima besenza eli lungiselelo lobuthixo lihle kangaka.”—EIndonesia.
“Kude kube ngoku, abazalwana abaninzi zange baliva ilungu leQumrhu Elilawulayo linikela intetho. Ngoku asibeva nje kuphela kodwa siyababona. Zange saziva simanyene ngale ndlela kunye neQumrhu Elilawulayo nabanye abazalwana bethu abasemhlabeni wonke.”—EKenya.
“Kunzima ukuqhuba unqulo lwentsapho kunye nabantwana bam ababini abafikisayo kuba umyeni wam akakholwa. Ngenxa yoko ndizixabisa gqitha iinkqubo zeli jelo. Zindenza ndizive ndiyinxalenye yentlangano, zisikhuthaza kakhulu mna nabantwana bam, nto leyo siyidingayo. Le ngokuqinisekileyo yintsikelelo evela kuYehova.”—EBritani.
“Silithanda kakhulu iJelo Losasazo LamaNgqina! Imithandazo yethu yaphendulwa xa labakho nangezinye iilwimi. Kusikhuthaza kakhulu bazalwana ukunibona nikhonza uYehova ngovuyo nangemincili. Ukususela oko bekukhululwe eli jelo, siziva singamalungu entlangano kaYehova emangalisayo ngakumbi kunangaphambili.”—ECzech Republic.
“Ukuva amalungu eQumrhu Elilawulayo ngolwimi lwam lwenkobe kundisondeze ngakumbi kuYehova.”—EBrazil.
“Sendineminyaka eyi-16 ndikhonza uYehova, kodwa uvuyo endinalo namhlanje ndinokuluthelekisa nolo ndandinalo xa ndandibhaptizwa. Enkosi kakhulu bazalwana abathandekayo ngeJelo Losasazo LamaNgqina.”—EBrazil.
Ngenxa yokuxhaswa nguYehova, siqinisekile ukuba iJelo Losasazo LamaNgqina liza kuqhubeka liyintsikelelo yobuthixo kubazalwana abasehlabathini lonke yaye liza kwenza ukuba uYehova adunyiswe aze azukiswe ngakumbi.
^ isiqe. 1 Eli Jelo Losasazo LamaNgqina linokubukelwa ngokungena kwiwebhsayithi ethi tv.jw.org./xh